Ukusetyenziswa kunye neZiphumo zeMidiya yokuSebenza ngokuNgenzi nzuzo
Iziphumo ezingenzi nzuzo kunye neMedia Media Iziphumo
NgoMvulo, Aprili 9, 2012 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Sisebenze kunye neenzuzo ezininzi kule minyaka kwaye kuhlala kubonakala ngathi zimbini iintlobo zebhajethi engenzi nzuzo… zero okanye iitoni. Bobabini, ndothuswa ngokunyaniseka yindlela abambalwa abafake inethiwekhi yokuncokola kunye neendaba zosasazo kumxube wabo. Iinkokeli ezingenzi nzuzo ziinkosi kuthungelwano, kodwa akubonakali ngathi zifumene amathuba okukhulisa loo nethiwekhi kwi-intanethi.
Uphando oluvela kwiNgxelo yeBenchmark yokuNxibelelana kweNtlalontle engenzi nzuzo ka-2012 ibonisa ukuba i-Nonprofits iyaqhubeka nokukhulisa ubukho bayo kwiinethiwekhi zentlalo ngaphandle kokuchitha ixesha elininzi okanye imali. Ukuntywila ngokunzulu kwindlela ezingenzi nzuzo ezifikelela ngayo ezi ziphumo kutyhile ulwazi olubalulekileyo.
Ukuba kuye kwakho inani ekufuneka likhwazisiwe phezu kophahla, kukuba idatha ibonisa ukuba umndilili we-Facebook uthanda ungabiza i-3.50 yeedola kodwa ingeniso evelisiweyo iyi- $ 214.81. Yimbuyekezo entle kutyalo-mali. Eyona nto iphambili kulo mthetho ubalaseleyo kukuba izinto ezingenzi nzuzo zitshintsha ubomi kwaye banebali elingakholelekiyo ...
tags: ingxelo yomgangathoimali engenzi nzuzoengenzi nzuzoIbhentshi elingenzi nzuzoImidiya yokuncokola
I-GrexIt: Indawo yokuGcina ulwazi kwi-imeyile zikaGoogle zikaGoogle